Barashada Habka ugu Fiican ee Caruurta Loo Tarbiyeeyo Loona Barbaariyo | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Maxay Tahay in Aad Sameyso Hadduu Kugu Dhaco Cudur Lagu Qaado Galmada?
Siddee Lagu Bartaa Xisaabta? |Tukesomalism.com
Sahal Issaakh, May 11, 2016
Abaal Nin Gala Waa La Arkaa Laakiin Nin Gudase Waa Yaryahay!
Mawliid Axmed Xassan — May 27, 2020
Barashada habka ugu fiican ee caruurta loo tarbiyeeyo loona barbaariyo. Ilmaha wanaagsani waa riyada iyo rajada hooyo iyo aabe kaste, barbaarinta wacan ayaa noqonaysa in lagu beero caruurta akhlaaqda wanaagsan inta ay yaryihiin, tarbiyada wanaagsanna ma aha amarro iyo sharciyo, balse ilmuhu wuxuu ka helaa habdhaqanka iyo ficilada waalidkiis, ka dibna deegaanka ku xeeran.
Qofkii barta barbaarinta hagaagsan ee caruurta, waxaa inta badan laga gartaa caruurta uu tarbiyeeyay.
Waxa laga yaaba inuu ilmuhu kaa raaco jidh iyo muuqaal ahaan )family heredity) balse waxa uu rumaysanaayo, diinta uu qaadanaayo, dhaqanka uu yeelanaayo iyo qaabka uu u fikiraayo hido maaha lagumana dhalo waa wax qofka lagu tababaro oo loo diyaariyo siduu u qaadan laha.
Waalidka shaqo adag ayaa hortaalla, habkuu u barbaarin laha caruurtiisa caafimaad ahaan, caqli ahaan, dhaqan ahaan iyo siduu ugu ilaalin laha afka, hiddaha iyo diintaba. Waa muhiim in uu waalidku barto oo diraaseeyo hababka ugu wacan ee caaruurta loo barbaariyo loona koriyo garaadkooda.
Caruurtu waa hantida ugu qaalisan ee ay ummadi leedahay, waa indho-doogsiga maanta iyo rajada berri, waa cududa ugu khatarsan ee ay ummadi ku faanto kulana tartanto ummadaha kale. Hadaba si aynu u soo saarno fac ama jiil dhinac walba ka dhisan aynu raacno talaabooyinka hoos ku qoran oo ah:
Caruurtu waa hantida ugu qaalisan ee ay ummadi leedahay, waa indho-doogsiga maanta iyo rajada berri, waa cududa ugu khatarsan ee ay ummadi ku faanto kulana tartanto ummadaha kale.
Qaababka ugu wacan ee caruurta loo tarbiyeeyo.
Caruurtaada dareensii masuuliyad, arimaha qoyskana kala tasho. Ha dareemaan in ay yahiin xubin muhiim u ah qoyska, qaybna ay ku leeyihiin tala wanaagga iyo horumarka qoyska.
Ilamaha ha ku fadeexadayn dadka hortiisa, canaanta iyo fadeexadu waxa ay ku sababaysa ilmaha dhaawac iyo xaalad nafsiyeed. Caruurtu qalad way sameeyaan Mararka qaarkood iyaga oo isku dayaya inay waalidka raali galiyaan. Hadii aad u cadhaysan tahay si gooni ah kaligood ula hadal.
Ku dhiiri geli caruurta kuna barbaari xidhiidhinta qaraabada iyo u samo-falka jaarka.
Ku dadaal in aad ilmahaaga u kaxayso masaajidka. Sidoo kale waa muhiin in aad caruurta mararka qaar debedda u saarto oo la soo sheekaysato amaba aad u raacdo goobaha ay isku madadaaliyaan(ku ciyaaraan).
U naxariiso caruurta una sheeg in aad jeceshahay. Waxa la ogaaday oo la tijaabiyey hadii waalidku uu fariin caadiya u diro caruurtiisa waxa laga yaaba in aanay hore ugu soo jawaabin, halka hadii uu u diro fariin ah “waan ku jecelahay” isla daqiiqadiiba ay u soo jawaabayaan.
Waa in aad qadarisaa caruurtaada asxaabtooda mararka qaarna aad ku marti qaado guriga.
La saaxiib caruurtaada oo kalsooni ku beer, si aad u ogaato waxay rabaan iyo waxay ku fikirayaan, taasina waxay kuu suurto galinaysa inaad si dhaw ula socoto waxa ay samaynayaan.
Uga sheekee sheekooyin xikmad leh, hido iyo dhaqankii wacnaa ee soomaalida sidoo kale lawadaaag taariikhdii nabiga(scw) iyo asxaabtiisa, Si uu u koro garaadka ilmuhu.
U samee qorshe ay kaga faa’idaystaan xilliyada ay firaaqada yihiin.
Wakhti fiican la qaado caruurtaada maalintiiba, adoon kala hadlaynin waajibaadka waxbarashada iyo hawlaha guriga.
Amaan caruurtaada kuna amaan muuqaalkooda guud, ficilo wanaagsan oo ay sameeyeen iyo wax kaste oo ay guul ka gaadheen.
Isku day in aad La cuntayso caruurtaada iyo xaafada oo dhan asbuuci mar ama labajeer, taasi waxay kor u qaadaysa jacaylka iyo xidhiidhka ka dhexeeya qoyska.
Qadari oo abaalmari caruurtaada marka ay guulaystaan. Guushaasi ha noqoto mid waxbarasho ama samaynta habdhaqan wanaagsan oo aad rabto in ay sii wadaan.
Dhagayso ilmahaaga. waalidiintu waa inay dhagaystaan ​​caruurta sidoo kale baraan wadahadalka, Waa muhiim in lagu dhiirigeliyo ilmaha wada hadalka iyo in la kordhiyo awooddiisa ah inuu naftiisa muujiyo laga soo bilaabo marxaladaha hore ee noloshiisa, taas oo kordhineysa awooda uu u leeyahay wada-xidhiidhka iyo la dhaqanka dadka kale ee mustaqbalka.
U noqo ilmahaaga tusaale wanaagsan iyo qof uu ku daydo wixii soo waajahana uu kula soo noqdo. Hadaba si ay taasi u suurto gasho waa inuu waalidku naftiisa hagaajiyo oo uu wanaajiyo ficilkiisa, hadalkiisa iyo dhaqankiisaba. Waayo ilmuhu waxa uu waalidkiisa ka arko ayuu ku barbaarayaa.
Caruurtaada ku tarbiyadee oo bar cudurdaarashada iyo hadalada wanaagsan, una sheeg cudurdaarashada iyo in qofku danbiga uu qirto in aanay ahayn liidnimo balse ay tahay sifo lamahadiyey oo wanaagsan.
Tags: Barashada Habka ugu Fiican ee Caruurta Loo Tarbiyeeyo Loona Barbaariyo
Next post Mahadhadii iyo Shirqoolkii Madaxwene John F.Kennedy
Previous post Culumada Sayniska ee Daaha Ka Qaaday Aragtida Atamka
About the Author Mawliid Axmed Xassan
Waa qoraa ka tirsan bahda qorayaasha ee Afrikaan.so Waa saynis-yahaan bartay culuumta sayniska iyo caafimaadka guud, waa qoraa iyo cilmi baadhe lafagura arrimaha bulshada, caafimaadka, dhaqanka, wacyigalinta iyo dhiirigelinta bulshada. Qoraagu wuxuu wax ku bartay wadanka Suudaan halkaas oo uu ku qaatay shahaadada heerka koowaad iyo labaad ee jamacada, oo kala ah kuliyadaha sayniska qaybta noolayaasha il ma aragtiga ah, heerka labaadna ku qaatay caafimaadka guud.
Gabay Ka Hadlaaya Guusha & Socdaalka Nolosha 30.50 views per day | by Maxamuud Axmed Muuse